I-Stablecoins Archives-Funda ukuRhweba
USenator wase-US u-Elizabeth Warren Ubiza abalawuli ukuba babambe phantsi kwi-Stablecoins kunye ne-DeFi
Kudliwano-ndlebe olusandul’ ukuqukunjelwa lweKomiti yeSenethi yeBhanki, ezeZindlu, kunye neMicimbi yaseziDolophini, uSenator wase-US u-Elizabeth Warren (D-Mass) wayalela abalawuli ukuba. “bamba phantsi” kwiiplatifti ze-stablecoins kunye ne-Decentralized Finance (DeFi) "phambi kokuba kube kade kakhulu, ucaphula i-Tether (USDT) kunye ne-USD Coin (USDC).
UWarren ugxininise oko kusekwe kwingxelo kaTether, “kuphela malunga ne-10% yee-asethi ezixhasa i-stablecoin yayo ziidola zokwenyani ebhankini. I-90% yenye into - hayi iidola zokwenyani. "
Ethetha ngozinzo lweklasi ye-asethi, uWarren wachaza ukuba: “Kumaxesha anzima kwezoqoqosho abantu badla ngokufumana imali kwiimveliso zemali eziyingozi baze bangene kwiidola zokwenyani. I-Stablecoins iya kuthatha i-nosedive ngokuchanekileyo xa abantu abaninzi befuna uzinzo, kwaye ukucinga ukubaleka-ebhankini kungaluphazamisa uqoqosho lwethu lonke. " USenator Warren wongeze ukuba:
"I-DeFi yeyona ndawo inobungozi kwihlabathi le-crypto. Yilapho ummiselo ungekho ngokufanelekileyo kwaye-akukho simangaliso-kulapho abaqhankqalazi, abaqhankqalazi, kunye nabakhohlisi baxuba phakathi kwabatyalo-mali bexeshana kunye nabahwebi bokuqala be-crypto. Shoot, kwi-DeFi, umntu akakwazi nokuba ujongene nomnqolobi. "
Uqhube wathi: “Ii-Stablecoins zibonelela ngobomi beDefi ecosystem. Kwi-Defi, abantu bafuna i-stablecoins ukurhweba phakathi kweemali ezahlukeneyo, ukurhweba nge-derivatives, ukuboleka kunye nokuboleka imali - zonke ezingaphandle kwenkqubo yebhanki elawulwayo. Ngaphandle kwee-stablecoins, iDefi iyema.
USenator uElizabeth Warren.
USenator uWarren uthi iStablecoins ibeka umngcipheko kuQoqosho lwaseMelika
Ngethuba lomcimbi wokuva, uprofesa kwiKholeji yoMthetho weYunivesithi yaseMelika u-Hilary Allen waphendula imibuzo malunga nokuba i-stablecoins ingaba yingozi kwinkqubo yezemali yase-US. USenator ubuze unjingalwazi. Allen, “Ingaba iDefi ibeka emngciphekweni uzinzo lwethu lwezezimali? Ngaba iDefi ingaqhubeka ikhula ngaphandle kwee-stablecoins?
Unjingalwazi waphendula wathi: “Andiqondi ukuba iDefi ingakhula ngaphandle kwee-stablecoins. Ndicinga ukuba kuya kuba nzima. Okwangoku, ndicinga ukuba i-Defi iqulethwe kwindawo apho ayiyi kuchaphazela uzinzo lwezemali, kodwa ukuba ikhula, ndicinga ukuba kukho ingozi yangempela apho. Ngokukodwa ukuba idibene nenkqubo yethu yezemali yemveli, kwaye kukho umdla woshishino ekulandeleni oku kudityaniswa kwimali yemveli kunye necala le-crypto. Ke, ndicinga ukuba kubalulekile ukuba i-stablecoins ingavunyelwa ukuba ikhulise ukukhula. "
Oko kwathiwa, uSenator uWarren wagxininisa ukuba: “Ii-Stablecoins azinabalawuli, azikho abaphicothi-zincwadi abazimeleyo, azinabaqinisekisi, akukho nto. Kwaye baxhasa enye yezona ndawo zimnyama kwihlabathi le-crypto - indawo apho abathengi bakhuselwe kancinci ekuqhathweni. " Waqukumbela ngelithi:
“Lo ngumngcipheko [ku] barhwebi … kuqoqosho lwethu. Ixesha lokuthatha amanyathelo ngaphambi kokuba yonke into iqhume. Abalawuli bethu kufuneka bazimisele ngokubambelela kule mingcipheko ngaphambi kokuba kube kudala kakhulu. ”
tags Defi, iindaba, IMIMISELO, USenator Warren, Stablecoins
Izicwangciso ezibalaseleyo zeMasterCard zeeCryptos, iiStablecoins, kunye neeCBDC
Ukuhlaziywa: 2 Agasti 2021
Izisombululo zeentlawulo ze-behemoth MasterCard zihlaziye izicwangciso zayo ze-cryptocurrency ngexesha lomnxeba wenkampani ngoLwesine. Umphathi omkhulu wale nkampani, uMichael Miebach, ucacisile ukuba iMasterCard ineenjongo zokudlala iindima eziphambili kwiindawo ezintathu kwishishini le-crypto. Kunye nee-cryptocurrensets ezinje ngeBitcoin, ifemi nayo inamehlo ngakwicala lezemali elizimeleyo nakwibhanki yeedigital currencies (CBDC). UMiebach uqinisekisile ukuba:
"Sifuna ukudlala indima kuzo zonke ... Ngokucacileyo yindawo ebonakalayo ejikeleze iimali zedijithali… Le yitekhnoloji efanelekileyo. Njengabadlali boololiwe abaninzi, siye sangena kule ndawo kuba abantu bafuna iimpendulo. ”
Kwii-cryptocurrensets, i-CEO icacisile ukuba: "Senza ukuba kube lula kwizikhwama ze-imali yedatha yokunxibelelana ngaphandle komthungo kwinethiwekhi yethu ngokusebenzisa umqhubi wenqwelomoya kunye nePaxos, Circle kunye ne-Evolve Bank kunye neTrust, eyenza lula ukuguqulwa kwe-crypto ibe yi-fiat." Wongeze wathi: "Ngokwahlukileyo, sisebenzisana neConsensys, inkampani yobunjineli yesoftware ye-Ethereum, ukukhawulezisa uphuhliso lwezicelo zeenkonzo kunye neenkonzo kubathengi bethu."
Utyalomali lwe-crypto, uMiebach uqaphele ukuba:
Ngokucacileyo, abantu bafuna ukutyala imali kuloo nto. Abafuni ukuthengisa utyalo-mali lwabo, kwaye siza kwenza oku kube lula kangangoko kunokwenzeka. Ke sinalo lonke olu bambiswano ngaphandle. ”
I-MasterCard yokuSebenza neCandelo labucala kunye nabalawuli beStablecoins
Kwiikhontrakthi ezizinzileyo, isigqeba sichaze ukuba iMasterCard yiyo "Ndidibana nabadlali becandelo labucala kunye nabalawuli malunga nokuba ujongeka njani umgaqo-nkqubo ujikeleze iinkozo zecandelo labucala kuba lo mbuzo malunga nokuthotyelwa kwemithetho awukasonjululwa."
UMichael Miebach uphinde walibuyisela ibango lakhe ngexesha le-Q1 yemivuzo eyabizwa ngokuba yi-MasterCard "Ukulungela ukwenza ubuchwephesha ukwenza uthungelwano lwethu ukuba luphathe ezi ngqekembe njengemali yokuhlala zigqibelele ukuba ziyahlangabezana neyesithathu - zonke iindlela zethu, oko kukuthi ukuthotyelwa kwemithetho, ukhuseleko lwabathengi kunye nozinzo."
Kwii-CBDCs, uMiebach wabalaselisa umdla okhulayo wokukhutshwa kwee-CBDC ziibhanki eziphambili kwihlabathi liphela. Isigqeba siqaphele ukuba:
"Ngokuqinisekileyo izinto ziyaqhubekeka ukuya phambili… kukho inkqubela ebonakalayo.
Ndicinga ukuba isindululo esibaluleke kakhulu apha liqonga lethu lovavanyo lokwenyani kuba lonke olu khetho kufuneka lwenziwe ngoorhulumente kwaye siyabonisana nabo, emva koko kufuneka siphile endle, ngokutsho. Kufuneka basebenze neziseko ezikhoyo zezemali, kwaye yiloo nto iqonga lethu lovavanyo elibenzela yona. ”
tags Ii-DCDCs, Cryptocurrency, MasterCard, iindaba, Stablecoins
I-Facebook Libra ikhupha iNguqulelo eNtsha yePhepha eliMhlophe kuVavanyo lwaBatyali mali lwamva nje
Ukuhlaziywa: 28 Juni 2020
Kunyaka ophelileyo, uFacebook wabhengeza imali yakhe entsha yedijithali, ebizwa ngokuba yiLibra ngobuchwephesha nguMbutho weLibra, into eyahlukileyo esekwe eSwitzerland, ngoku enamalungu angama-27: uninzi lwazo ziinkampani zobuchwephesha ezifana neUber kunye neSpotify, kunye neenkampani zeVC ezinje ngoAndreessen Horowitz kunye noManyano. Ventures zesikwere.
Iprojekthi yeLibra iye yahamba kancinci yaqhubela phambili ihlolwe kubalawuli bezemali.ngokungafaniyo nesiqubulo sikaFacebook esithi “hamba ngokukhawuleza kwaye wophule izinto. Ngokukodwa, ngoku kuthiwa ayiyiyo iprojekthi ye-Facebook, kodwa iqale ku-Facebook enabasebenzisi abangaphezu kwe-2.5 yezigidigidi -yesithathu kwiplanethi.
Abalawuli babeke iziqhoboshi kwiprojekthi becinga ukuba kungeniswa imali yedijithali entsha kunokwenza ukuba i-Facebook ibe ligunya lezoqoqosho kwihlabathi liphela.
Kunyaka omnye kamva, iLibra yathumela ingxelo entsha yephepha elimhlophe ukujongana nezinye zezi ngxaki zibizwa ngokuba yiLibra 2.0. ILibra 2.0 ijongeka ngakumbi njengenkqubo yentlawulo yedijithali njengePayPal eyakhelwe kwiqonga le-blockchain. ILibra "isipaji" sifana neakhawunti yebhanki oyimisileyo ngeFacebook.
Inguqulelo eNtsha yeLibra yePhepha eliMhlophe
1) IiStablecoins. Kwimephu yendlela entsha, iLibra isebenzisa iiStablecoins eziboshwe kwiimali ezithile (njengemali yaseMelika), ukongeza "kubhasikidi" weemali ezisetyenziswe kwisindululo sabo sokuqala. ILibra iya kuba "yimeta yemeta."
I-2) Ukonyuka kokuthotyelwa kwemali ngokungekho semthethweni: uya kuba nakho ukusebenzisa iLibra kuphela ngokuhamba "kwisipaji sokugcina okanye ukutshintshiselana" okanye uzenzele ngokwakho "Isipaji esingenampahla" esiya kuthi senziwe yi-KYC / AML eyakhelweyo.
I-3) Iqiniswe ngakumbi embindini: ILibra izilahlile izicwangciso zokuhambisa iLibra kwinkqubo emiselweyo kwiminyaka emi-5 kwaye yayenza yabucala ibhlokhi ngezicwangciso zokuvota amalungu amaninzi kuMbutho weLibra rhoqo.
Isishwankathelo, iLibra iya kuba yinethiwekhi yentlawulo, esekwe kwi-blockchain yabucala. Ixhaswe yimali "yokwenene" kodwa kuya kuba lula kakhulu kwaye kungabizi kakhulu ukuhambisa imali kunamhlanje. Ekutyalomali kwiLibra, awungekhe uthenge iLibra namhlanje, kodwa ungathenga isitokhwe seFacebook.
tags Cryptocurrency, I-Libra ye-Facebook, Stablecoins, IPhepha leMhlophe
Isicwangciso soMbutho weLibra sokuGqibela, esiya kuBalawuli
Umbutho weLibra urhoxa kwisicwangciso sokuqala semali enye yedijithali exhaswa yiphuli yezemali yelizwe, kwiinzame zokwanelisa abalawuli bamanye amazwe.
Iqela eliququzelelwe nguFacebook kunyaka ophelileyo ngoku lilungiselela ukwenza uluhlu lweeStablecoins nganye emele imali yelizwe eyahlukileyo.
Omnye umqondiso we-libra, umzekelo, mhlawumbi wabelwe idola yaseMelika, enye kwi-euro, njalo njalo.
ILibra ikwaceba ukwazisa i-Stablecoin yeemali ezininzi, nangona kunjalo, iya kuhlala iqinisekisiwe ziiStablecoins zamva nje, endaweni yeemali eziqhelekileyo ezigcinwe ikakhulu ebhankini. Itemplate yamva nje inokuthintela ukungahambelani kweLibra, njengokuncamathelisa (okanye ukususa) imali esiqhumeni kubandakanya ukongezwa kwethokheni yedijithali (okanye isuswe).
Olu tshintsho, luveze uLwesine, lubonelela ngolwalamano oluluqilima koorhulumente kunye neebhanki eziphambili kwihlabathi liphela abavakalise ingqumbo yabo kwisicwangciso sokuqala seLibra, ikakhulu ngenxa yoloyiko lokuba izakwenza buthathaka ukuzimela kwabo kwezemali.
USomandla uStablecoins wazisiwe kuLawulo lweziBheno
Ekuqaleni, iLibra yayijolise ekuphuhliseni iStablecoin exhaswa yibhasikithi yemali kunye nezokhuseleko zase-US ezivela kwitrasti. Amalungiselelo atshintshiwe namhlanje kuthathelwa ingqalelo ukubamba ii-Stablecoins ezininzi ezinikezela ngee-fiat currencies. Ukunyanzelwa kombutho ngokuqinisekileyo ngumzamo wokuqinisekisa oorhulumente bakhathazekile malunga nokuphuhlisa iStablecoin yomhlaba wonke enabantu abayi-2.5 yezigidigidi eyakhelweyo isiseko sabathengi.
Olu phuhliso luza ngeentsuku ukusukela oko iibhanki ezingoovimba zanikwa izikhokelo yiBhodi yoZinzo lwezeMali eqaqambisa ugcino olomeleleyo malunga nomngcipheko okhoyo kukhuseleko lwezoqoqosho olukhuliswe ziiStablecoins.
Isikhokelo siqhubeka nokuphendula imibuzo eyaqala yaphakanyiswa xa iLibra kunyaka ophelileyo ityhila iinjongo zayo. ILibra iya kukhupha i-Stablecoin yemali emininzi, kodwa ibhasikiti yayo yangoku ene-fiable eneStablecoin izakuyibuyisela ngenye indlela.
tags Umbutho weLibra, Umqondiso weLibra, Stablecoins
Indawo eNtsha yoGcino lweHlabathi iya kuba yiMali yeDijithali
Ukuhlaziywa: 17 Disemba 2019
Njengokuba amazwe amaninzi kwihlabathi jikelele etsiba kwi-Central Bank Digital Currency bandwagon, ilizwe lisondela kufutshane ne-CBDC eyaziwayo kwihlabathi liphela.
Nangona kunjalo, i-United States ikwimbalasane kugqatso lokuphuhlisa imali yokuqala yedijithali kwihlabathi liphela njengoko ulawulo lwedola yaseMelika lusemngciphekweni omkhulu. Esi sizathu sokuba urhulumente wase-US enze okuninzi ukulawula okanye ukumisa ukukhutshwa kwee-Stablecoins zabucala ezinjengeLibra.
I-USD yaba yimali ephakathi komhlaba emva kwemfazwe yehlabathi yesibini. Eli nqanaba linike i-USD ukongama ngaphezu kwezinye iimali zehlabathi, ke kuyaqondakala ukubona ukuba kutheni abasemagunyeni base-US besilwa nzima ukuze babugcine ubungangamsha kwaye baya kude benze i-CBDC esekwe kwidola.
Ingxaki ngeDola yaseMelika
Idola yaseMelika ingachazwa “njengamandla” athe atyhalela uqoqosho lwehlabathi kwizinga eliphezulu. Ngelishwa, le nkqubo iya isiba yeyokuphelelwa lixesha kwaye icotha ukuqwalasela ezinye inkqubela phambili zehlabathi.
Ngexesha apho sinobuchwephesha obufana ne-imeyile kunye ne-blockchain enokuthi isebenzise ukuthengiselana ngemizuzwana, ngaphandle kwendleko, ukuhambisa iidola kumazwe aphesheya kunokuba kubiza kwaye kunzima. Oku kuphelelwa lixesha kukuthintela ukukhula nokukhula koqoqosho lwehlabathi.
Okwangoku, kuyacaca ukuba kukho imfuneko yokufumana enye indlela ekhawulezayo nenempumelelo yokuhlawula idola, ekule meko yimali yedijithali esekwe nge-blockchain.
Kutheni kuthabatha ixesha elide ukuPhuhlisa iMali eyamkelwe kwilizwe jikelele
Lo mbandela wokuphelelwa lixesha yile nto bathanda iLibra abazama ukuyilungisa. ILibra yimali yedijithali egunyazisiweyo ebonelela ngesisombululo esigudileyo, esilula nesinexabiso eliphantsi kwimida. Obo buchwephesha ngaphandle kwamathandabuzo buza kuphucula inkqubo yorhwebo kwihlabathi liphela.
Nangona kunjalo, ngenxa yokuba yeyabucala kwaye isegunyeni, oorhulumente kunye neearhente zolawulo kwihlabathi liphela banoluvo lokuba inokusongela ubugwenxa bemali yeemali zesintu kwaye ngenxa yoko beme nkqi ngokuchasene nayo. Ukuphela kwendlela yokuphuma kweLibra iya kuba kukungqamana phantsi korhulumente, kodwa oku akubonakali ngathi kunokwenzeka.
Okwangoku, onke amehlo ajonge i-US njengoko banokulahleka okungakumbi ukuba inkqubo yemali icelwe umngeni.
Amanye amazwe afana ne China ne France nawo enza inkqubela phambili enkulu kukhuphiswano lokuphuhlisa i-CBDC yokuqala eyaziwayo.
tags I-DCDC, iTshayina, Fransi , Libra, Stablecoins, Idola yaseMelika, EUnited State
I-EU yokuThintela ukukhula koStablecoins kwiiNgingqi zaseYurophu
Iinkokheli ze-European Union zifikelele kwisivumelwano sokuba akukho nkqubo ka-Stablecoin iyakunikwa imvume yokusebenza kumhlaba wase-Yuropu de izoyikiso eziyindumasi ezibekwa ngu-Stablecoins kulawulo lwemali sele kujongwene nazo.
Oku kubhengezwe kwingxelo ngokudibeneyo liBhunga le-EU kunye neKhomishini yaseYurophu. Nangona imizimba ivumile ngamxhelo-mnye ukuba ii-Stablecoins zinokubonelela ngesisombululo esisebenzayo, esinexabiso eliphantsi kunye nesheshayo sokuhlawula, bachaze ukuba izoyikiso ezibekiweyo zingaphezulu kakhulu kwezibonelelo
Upapasho lwamkelwa ngomhla we-5 kweyoMnga liBhunga leMicimbi yezoQoqosho nezeMali.
Izisongelo ezibekwe ziiStablecoins
Kupapasho, i-EU ichaze izoyikiso ezininzi kunye neengxaki ezinxulumene nokwamkelwa kweStablecoins. Umbutho umi ngelithi ukuba ezi projekthi ziyamkelwa kwihlabathi liphela, oko kungabeka emngciphekweni ulawulo-mali lwehlabathi.
I-EU iqhubeke ichaze kupapasho ukuba ukwamkelwa kwe-Stablecoins kuzisa izoyikiso kunye neengxaki kwiindawo ezinje ngokhuseleko lwabathengi, imfihlo, inkxaso-mali yobunqolobi, irhafu, ulawulo nezinye ezininzi. I-EU yathi ii-Stablecoins zinokuqinisa izoyikiso kwezi ndawo kwaye zinokudala iingxaki kwimigaqo-nkqubo yezemali kunye nozinzo lwezezimali.
I-EU iyalela iinzame zokuSebenza ngokuPhatha uStablecoin
Kusapapasho, i-EU ibongoze eminye imimandla ukuba yamkele umzamo wokusebenzisana ekusombululeni iingxaki ezibangelwa ziiStablecoins. Umbutho ukwakhankanye ukuba amaqumrhu acwangcisa ukukhupha ii-Stablecoins kulawulo lwe-EU kufuneka anikezele ngedatha eyaneleyo kwimveliso yawo kwaye akulungele ukuba kujongisiswe kuwo ukuqinisekisa ukuthotyelwa kwemigaqo nemigaqo yombutho.
Nangona kunjalo, i-EU ivakalise ukuvuma kwayo kweebhanki eziphambili eziphanda ngokulungileyo kunye neziphene zokuvelisa imali yebhanki eyidijithali. Bakwaxhasa uphando lwasekhaya ekudalweni kweendlela zokuhlawula ezinqabileyo nezikhawulezayo.
Irhuluneli yaseBanque De France kutshanje ichaze izicwangciso zokuqalisa inkqubo yokulinga ye-CBDC yasekhaya kwikota yokuqala ye-2020.
I-US Elites yezeMali ibonakalisa ukukhathazeka kwabo ngaphezulu kweeStablecoins kunye nee-Cryptocurrensets
Ukuhlaziywa: 5 Disemba 2019
Ibhodi yabalawuli bezemali abakhethiweyo e-US inikeze isilumkiso kuluntu ngokubanzi malunga neengozi ze-Stablecoins kunye ne-cryptocurrencies.
Ngomhla we-4 kuDisemba, iBhunga eliJongene noZinzo lwezeMali labonisa kwisilumkiso sayo, iingxaki ezinokubakho ukuba iStablecoins yamkelwe.
I-FSOC yasekwa ngonyaka ka-2008, emva kokudodobala kwemali ngo-2008, ukujongana nemingcipheko kwishishini lezemali. Ibhodi i-Sihlalo ngu-Nobhala wase-US we-Ofisi kaNondyebo, uSteven Mnuchin kunye namalungu ebhodi okuvota aquka uSihlalo we-SEC kunye noSihlalo weKhomishini yezoRhwebo yeXesha elizayo.
Isithintelo se-FSOC esiya kwiiStablecoins
Abalawuli babhalisa ukungazithembi kwabo ii-Stablecoins kwingxelo yabo yonyaka. Ukucacisa, basebenzise isifaniso apho ii-Stablecoins zamkelweyo kwinkqubo yezemali kwaye zifumane ukwamkelwa njengevenkile yexabiso. Ukuba ukuphazamiseka bekuza kwenzeka kwii-Stablecoins kuloo meko, kunokubonisa intshabalalo kuqoqosho luphela.
Bongeze ukuba abalawuli bezemali kufuneka bavavanye izoyikiso ezinokubakho ngokwamkelwa kweeasethi zedijithali. I-FSOC ikwakhankanye iBitcoin kunye nezinye izinto zokugcina imali njengezisongelo kuqoqosho. Nangona kunjalo, kubonakala ngathi babengenakho ukubonelela ngezizathu eziqinisekileyo zokungazithembi i-cryptos.
Ibhodi iqhubile yaveza ukuthandabuza kwabo kwi-Distributed Ledger Technology besithi impumelelo kunye nokusetyenziswa kwetekhnoloji kwishishini lezemali "bezingaqinisekanga".
Ukuthanda kukaMnuchin okungagcinwanga kweBitcoin
Unobhala Wezemali wase-US uSteven Mnuchin uhlala echasene nombono weBitcoin kwaye uvakalise ukungayithembi kwakhe imali ye-cryptocurrency amatyeli amaninzi. Kudliwanondlebe ngoJulayi, wagomela ukuba kwiminyaka emihlanu okanye emithandathu ukusukela ngelo xesha, uBitcoin uzakuphela, esithi ngelo xesha uzakubanezinye izinto eziphambili hayi i-Bitcoin.
Uye waqinisekisa ukuba ngekhe abandakanyeke buqu kwi-cryptocurrency.
Okwangoku, abenzi bomthetho baseMelika basajolise ekujonganeni nezisongelo ezibonakalayo ezivela kumzi mveliso we-crypto, ngakumbi iprojekthi ye-Facebook ecetywayo yaseStablecoin, iLibra.